चितवनमा कोरोना संक्रमितको संख्या ८४७ पुग्यो : कुन पालिकामा कति ? – Shasankhabar
चितवनमा कोरोना संक्रमितको संख्या ८४७ पुग्यो : कुन पालिकामा कति ?
चितवन । चितवनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको संख्या ८४७ पुगेको छ । जसमध्ये १५४ जना कोरोना मुक्त भएकाछन् । पछिल्ला दिन कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ ।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी संक्रमित भरतपुर महानगरपालिकामा रहेका छन् । भरतपुरमा संक्रमितको संख्या ५२५ जना पुगेका छन् भने ७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
जिल्लामा दोस्रो धेरै संक्रमितको सूचीमा रत्ननगर नगरपालिका रहेको छ । रत्ननगर नगरपालिकामा ११२जनालाई कोरोना संक्रमण भएको छ १ जनाको मृत्यू भएको छ ।रत्ननगर–४ देबौलीमा रहेको शिवशक्ति खाद्य उद्योगका ५० बढी कर्मचारीलाई संक्रमण पुष्टि भएको छ । ती सबै संक्रमित अहिले उद्योेग भित्रकै आइसोलेसन कक्षमा रहेका छन् । एकै ठाउँमा यति धेरै संक्रमित भेटिएको चितवनमा यो पहिलोपटक हो ।
राप्ती नगरपालिका :
चितवनमा पहिलो पटक कोरोना पुष्टि भएको राप्ती नगरपालिकामा ८८ जनालाई संक्रमण भएको छ । वैशाखमा पहिलोपटक चितवनमा दुई जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । यहाँ रहेको सशस्त्र प्रहरीको गणमा कार्यरत ५० बढी प्रहरीमा एकैपटक संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
माडी नगरपालिकामा ५२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । माडीमा अहिले ११ जना मात्रै संक्रिय संक्रमित छन् । ५२ जना संक्रमण पुष्टि भएकोमा ४१ जना यसअघि नै निको भएर घर फर्किएका छन् ।
खैरहनी नगरपालिकामा संक्रमितको संख्या ५० पुगेको छ । यस नगरमा पनि पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । खैरहनीका एक जनाको भने घरमै मृत्यु भएको हो । ती १०८ वर्षीया वृद्धाको मृत्यु पश्चात कोरोना पुष्टि भएको थियो ।
कालिका नगरपालिकामा संक्रमितको संख्या १६ पुगेको छ । ५ जना निको भएर घर फर्किएकाछन । बन डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत कालिकामा काम गर्ने कर्मचारी र क्वारिन्टिमा वस्नेमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो । एक जना प्रहरीमा कार्यरत व्यक्तीलाई पनि कोरोना देखिएको थियो ।
जिल्लाको एक मात्र गाउँपालिका इच्छाकामनामा तीन जना संक्रमित फेला परेका रहेको छ । असार महिनासम्ममा इच्छाकामनामा एक जनामा पनि कोरोना संक्रमण फेला परेको छैन । साउन यता मात्रै संक्रमण फेला परेको हो ।